मोज के हो ? | Wakhet Diary
मोज के हो ?
Posted on December 3, 2012 by Wakhet Diary
मोज पढे पछि (जस्ले पढ्नु भएको छैन उहाँहरुको लागी)
-” मोज” – सुख र सन्तुष्टिका क्षणहरु
” मोज ” सोध्नु यो कर्ण शाक्य को नयाँ किताव हो। कर्ण शाक्य को यो चौथो किताव हो। सोच, खोज, म सक्छु पछि २०६९ भदौमा प्रकाशन भएको किताव हो।
पेज- ३८८ ‌+ ६
मुल्य – ४००
प्रकाशक- बुद्वमाया प्रकाशन
मोज मा के छ ?
” मोज” – सुख र सन्तुष्टिका क्षणहरु
साँच्चै कै लेखक को आफ्नै जीवनको सुख र सन्तुष्टिका क्षणहरु छन। नकरात्मक आँखाले हेर्ने हो भने मोजमा आफ्नै गौरवको ब्याख्या छ। तर सकरात्मक नजरले हर्ने हो भने मोज भित्र हामीले पनि मोज गर्नु मिल्ने तर जान नसकिने ठाउँहरुको बर्णन ४०० रुपैयामा आफ्नै हातमा छ। ४०० रुपैया मा तपाई सन्सारको मुख्य मुख्य ठाउँ यात्रा गर्न सक्नु हुन्छ। कुन ठाउँमा कति मा खाना पाईन्छ। कहाँ कतिमा एपार्टमेन्ट पाईन्छ डिटेल छ।
मलाई मन परेको कुरा त्यहाँ – ” New York Water City- The Movie को स्क्रिप्ट छ- अँग्रेजीमा। यो फिल्म बन्ला नबन्ला तै पनि हामीले कथा पढ्न सक्छौ फिल्म बन्नु भन्दा पहिला नै । यो पनि उहाँको New York यात्रा को ३ महिना मा लेखिएको स्क्रिप्ट हो। यस्ले के सन्देश दिन्छ भने तपाई भित्र पनि सोच छ भने ३ महिना मा फिल्म को कथा नै लेख्नु सक्नु हुन्छ भन्ने सजह सन्देश छ। यस्ले तपाई पनि अँग्रेजीमा लेख्नु पर्छ भन्दैन तर धुमाउरो पाराले तिमी जहाँ छौ त्यहाँ को पनि फिल्म बन्नु सक्छ भन्ने सम्भावना छोडेको छ।
साथी भाई सँगको गफगाफ बुढेशकाल को आँगनमा पुगेको बुढाको जस्तो छ। नकरात्मक आँखाले हेर्ने हो भने तर सच्चाई त्यही हो सबैलाई सबै भन्दा मन पर्ने भनेको आफ्नै जीवनको बितेका पलहरु नै हुन। हामी जसरी बाँचेका छौ त्यो एक पटक सम्झनु र जीवनलाई सार्थक बनाउनु पर्छ भन्ने मोजमा सन्देश छ।
मोज किताव रिटायर्ड पुस्ता को लागी भनिएको छ। तर सकारत्मक बिचार रिटायर्ड हुनु भन्दा पहिले पनि अरुलाई पनि सेयर गर्नु पर्छ भन्ने नै कितावको मुख्य सार हो । जस्तै पि एच डि गरेका रिटायर्डहरु आफ्नो अनुभव अरुलाई नसुनाई मरे भने उनीहरुको अनुभव, सीप, ज्ञान उनिहरु सँगै मरेर जान्छ त्यस्सैले सक्रिय रुपमा समाज मा बाँच भन्ने सन्देश मोज भित्र छ।
सोच, खोज लाई म पढ्नै पर्ने किताव हो भन्छु तर “मोज” पढे पनि हुन्छ न पढे पनि हुन्छ। मात्रै मोज पढेर नबुझ्ने पाठक ले जीवनलाई मोज गरेको पलहरु भनेर बाँचे भने अझै बढि बाँच्न सक्छन। जीवन बाँच्नु पनि एउटा मोज हो भन्ने कुरा मोज बाट सिक्नु परेको छ।
मोज ले कर्ण शाक्यलाई त्यही दिएको छ। जुन जीवन भरको मेहेनत लगाएर स्थापना गरेको उनको पर्यटन ब्यबसाय भन्दा फराकिलो छ। त्यो हो किताव लेख्नु र पाठक को प्रसँसा सुन्नु र प्रसँसा गर्नु ।
मोज को बारेमा मेरो मन को धारणा।
मोज को परिभाषा समाय, परिबेश र ब्याक्तीमा फरक फरक हुन्छ। नाङगो पाईला भएको मानिसलाई पुरानो जुत्ता लगाउनु पाउनु पनि मोज हुन्छ। बैसाखी मा उभिएको मानिस लाई सग्लो खुट्टा मात्रै पनि मोज हुन्छ। खुत्ता हुने हो भने उ जुत्ता जति पनि किन्न सक्छु भन्ने सोच्दछ। जुत्ता हुनेहरुलाई नयाँ जुता मोज हुन सक्छ। आबस्यकता पुरा गर्नु सक्नु मोज को पहिलो दर्जा हो। आबस्यकता पुरा गर्न सक्नु सुख को अनुभुती नै मोज हो । तर बुझ्नु पर्ने कुरा आबस्यकता बढ्दै जान्छ त्यसैले लगतार मेहेनत गर्नु पर्छ। आबस्यता भन्दा बढि धन भयो भने मानिस स्वार्थी र दुखी एकै चोटी हुन्छ।
मोज बाट मैले सिकेको कुरा
समस्या जस्लाइ पनि हुन्छ मन हुने जतिलाई मन छ र दुख्छ मनलाई दुख्न दिनु हुदैन। मन भित्र माया छ यस्लाई सुक्नु दिनु हुदैन। माया नै यथार्थ हो। जस्ले जीवनलाई माया गर्दैन उस्ले अरुलाई पनि माया गर्न सक्दैन।
मोज पढ्दै गर्दा मलाई पुर्खेौउली गीत खोज्नु जाँदा जस्तै भयो। कतै रक्सी नपुगेर कुरा निस्केन। कतै रक्सी बढि भएर चुरो निस्केन। कतै आफैले नबुझेको भएर सोध्न सकिएन। कतै गुरुकुल को सास मा बाँचेका गुरु मण्डलीहरुले उनीहरु नमरी चेला नबनाउने मुड तै पनि मैले जति पाए जति समाय त्यो नै खोजी को प्राप्ती मानेर मैले पनि मोज गरे। थुप्रै कुरा सिकेर आए। सिकाई नै जीवन हो। कहिले मारुनीलाई पुर्खेउली हो भनेर मख्ख परे,कहिले सोरठीलाई कहिले, कहिले नाँचरीलाई, कहिले ख्याली लाई पुर्खयौली हो भनेर भ्रम परे। आखिरीमा यि सबै को मुल जरा नै पुर्खेयौली गीत हुन्न भनेर मैले अहिले सम्म को धारणा बनाएको छु। तर मलाई थाहा छ यो मात्रै पुर्खेयौली को परिभाषा होईन। सागर भित्रका असँख्य जीव जस्तै पुर्खौयौली गीत भित्र पनि असँख्य हाँगा बाँचेका छन। यि हाँगा हरु भेटिनु पनि मोज हो । अर्थात जस्ले जे खोज्दछ उस्ले त्यो पाउनु मोज हो ।
-स्यानु पाईजा , पात्लेखेत-७,वाखेत म्याग्दी
This entry was posted in बेला मौकाका कुरा by Wakhet Diary. Bookmark the permalink.